Politikam-pirenena : Apetraka amin’ny toerana sahaza azy ny tanora -
AccueilRaharaham-pirenenaPolitikam-pirenena : Apetraka amin’ny toerana sahaza azy ny tanora
Efa manana ny politikam-pirenena ho an’ny tanora ny fitondram-panjakana, ary efa andalana ny fametrahana ny paikady izay ho entina amin’izany. Io no politika ankapobeny hitantanana ny tanora amin’ny alalan’ny programan’asa maro ao anatiny, toa ny fanomezana azy ireo am-pelatanany ny fitaovana ahafahana tonga amin’ izany. Efa vita ireo drafitra entina manatanteraka izany politikam-pirenena ho an’ny tanora izany, ary ezahina hotanterahina ao anatin’ny dimy taona ny dingana voalohany, izany hoe ny tetikasa fohy ezaka sy ny antonony ezaka. Izao fankalazana izao dia efa voarafitra tanteraka ao anatin’izany politikam-pirenena ho an’ny tanora izany. « Tanora manorina fandriam-pahalemana maharitra ». Io no lohahevitra nosafidiana nandritra ny fankalazana ny Andro Iraisam-pirenena ho an’ny tanora izay notanterahina tao amin’ny renivohitr’i Fianarantsoa ny 10 hatramin’ny 12 aogositra 2017. Nanokatra tamin’ny fomba ofisialy ny lanonana ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier ny sabotsy 12 aogositra 2017 teny amin’ny Gymnase Couvert Ambatomena Fianarantsoa. 700 mianadahy ireo tanora nisolo tena ny Faritra 22, izay tonga nanatrika ny andro iraisam-pirenena ho an’ny tanora.
Nanambara ny Praiminisitra nandritra ny lahateniny fa “maniry hametraka fanamby aminareo tanora ny Fitondram-panjakana eto Madagasikara dia ny hoe ivon’ny fampandrosoana ianareo ka tokony homena toerana sahaza anareo. Aza mety hapetraka amin’ny toerana tsy sahaza anareo ianareo”. Eo anatrehan’ny lohahevitra izay nosafidiana dia nanome hafatra ny Lehiben’ny Governemanta fa manana anjara toerana amin’ny fampandrosoana ny firenena ny tanora ary antoky ny fampandrosoana. “ Efa antoky ny fampandrosoana ankehitriny ianareo. Aoka ho tanora mpanorina fa tsy tanora mandray anjara na hampandraisana anjara amin’ny fanapotehana an’i Madagasikara. Tokony ho fianarana ianareo tanora. Mahaiza mifandefitra sy mifankatia” hoy hatrany ny Praiminisitra. Teo anatrehan’izany dia nanamafy ny Lehiben’ny Governemanta fa ny fanirian’ny fitondram-panjakana ankehitriny dia ny hananana tanora maro mandray andraikitra. “Manao ny asany ny Fitondram-panjakana ary tokony hanao ny asany ny Ray aman-dreny. Tokony harena ianareo tanora fa tsy vesatra ka mila kolokoloina” hoy hatrany ny Praiminisitra.
Nandritra ny lanonana dia nisy ny fanaovan-tsoniam-piaraha-miasa teo amin’ny minisiteran’ny Atitany sy ny Fitsinjaram-pahefana, izay notarihin’ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta no sady Minisitry ny Atitany sy ny Fitsinjarampahefana, sy ny Ministeran’ny tanora ary ny UNFPA, amin’ny fiaraha-miasa hametrahana tetikasa ho an’ny tanora eto Madagasikara. Tetsy andanin’izany ihany koa dia nisy ny fametrahana vato fehizoro amin’ny hananganana ny tranon’ny tanora na ny “maison des jeunes”. Teo ihany koa ny fitsidihana ireo trano heva. Ny taona 2018 no hanatanterahina ny andiany manaraka eo amin’izay andro iraisam-pirenena ho an’ny tanora izay, ary any amin’ny renivohitr’i Toliara no hotanterahina izany